Mary Sharpe, Onye isi ọrụ - Regwọ Ọrụ .gwọ
Home Mary Sharpe, Onye isi nchịkwa
A mụrụ Mary Sharpe na Glasgow ma tolite n'ezinụlọ a raara nye ọrụ ọha na eze site na nkuzi, iwu na ọgwụ. Site na nwata, o nwere mmasị na ike nke uche ma na-amụ banyere ya kemgbe ahụ.
Mmụta na Ahụmmara
Mary gụsịrị akwụkwọ na Master nke Arts na Mahadum Glasgow na French na German na nkà mmụta uche na nkà ihe ọmụma omume. O sooro nke a site na nzere bachelọ na iwu. Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ, ọ rụrụ ọrụ dị ka onye ọka iwu na onye ọka iwu maka afọ 13 sochirinụ na Scotland na afọ 5 na European Commission na Brussels. Mgbe ahụ ọ malitere ọrụ gụsịrị akwụkwọ na Mahadum Cambridge wee bụrụ onye nkuzi ebe ahụ maka afọ 10. Na 2012 Mary laghachiri ngalaba nke ndị ọka iwu, Scottish Bar, iji mee ka ọrụ ụlọ ya nwee ume. Na 2014 ọ gara na-emeghị ihe ọ bụla iji melite Regwọ Ọrụ wardgwọ. Ọ ka bụ onye otu College of Justice na ngalaba nke ndị na-akwado ya.
Meri enweela ọtụtụ ọrụ ndu na Regwọ Ọrụ .gwọ. N’ọnwa Juun afọ 2014 ka ọ bụ onye isi oche. Na Mee 2016 ọ banyere ọrụ ọkachamara nke Chief Executive Officer nke ọ na-eme ruo mgbe Nọvemba 2019 mgbe ọ sonyeere Board dị ka oche. N'oge na-adịbeghị anya, na Machị 2021 ọ laghachiri ọrụ nke Chief Executive Officer.
Mahadum nke Cambridge
Mary gara Mahadum nke Cambridge na 2000-1 iji gụchaa ọrụ gụsịrị akwụkwọ n'ịhụnanya nwoke na nwanyị na mmekọrịta nwoke na nwanyị na oge okike n'oge oge gboo ruo na mmalite Oge. Usoro uru dị iche iche na-emegiderịta onwe ha pụtara n'oge ahụ dị oke mkpa ka na-emetụta ụwa taa ọkachasị site n'okpukpe na ọdịbendị.
Mary nọrọ na Cambridge afọ iri na-eso ya.
Na-arụ ọrụ kacha elu
Na mgbakwunye na ọrụ nyocha ya, Mary zụrụ azụ dị ka onye nhazi ọgbakọ na Mahadum ya na mba abụọ, ụlọ ọrụ na-enweta mmeri na-eji nyocha sitere na akparamaagwa na akwara ozi n'ụzọ etinyere. E lekwasịrị anya na ịmaliteghachi ike nrụgide, ijikọ ndị ọzọ na ịghọ ezigbo ndị isi. Ọ na-arụ ọrụ dị ka onye ndụmọdụ ka enterprise ụmụ akwụkwọ na dị ka a sayensị edemede maka Ụlọ ọrụ Cambridge-MIT. Nke a bụ njikọta n'etiti ụlọ ọrụ Massachusetts Institute of Technology (MIT) na Mahadum Cambridge.
Njikọ ya na Mahadum Cambridge na-anọgide site n'aka abụọ Edlọ akwụkwọ St Edmund na Lucy Cavendish College ebe ọ bụ Onye Mmekọ.
Mary nọrọ otu afọ dị ka Onye Ọbịa Ọbịa na St Edmund's College, Mahadum nke Cambridge na 2015-16. Nke a mere ka o nwe ike ịchụso nyocha na sayensị na-apụta ahụ riri ahụ. N’oge ahụ ọ kwuru okwu na nzukọ iri na abụọ mba na mba dị iche iche. Mary bipụtara otu isiokwu "Strategies to Prevent Internet Porno Porno Addiction" nke dị Ebe a (peeji nke 105-116). Ọ na-edekọkwa otu isi na Rụ ọrụ na Mmejọ Mmekọahụ - Ntuziaka maka Ndị Ọzụzụ nke Routledge bipụtara.
Site na Jenụwarị 2020 ruo mgbe mkpọchi mbụ nke ọrịa a, Mary nọ na Lucy Cavendish College dị ka onye Ọbịa na-eleta. N'oge ahụ ọ bipụtara a akwụkwọ ya na Dr Darryl Mead ebe nyocha nke ọdịnihu nwere ike ịga.
Mary gara n'ihu na-arụ ọrụ na-eri ahụ ahụ dịka onye so na Òtù Mba Ụwa Maka Ọmụmụ nke Ịṅụ Ahụhụ Ọdịdị. O weputara akwukwo na ogbako ha nke isii nke uwa na Yokohama, Japan na June 6. O na ebiputa research na mpaghara a na-emepe emepe na magazin a na-enyocha ndị ọgbọ. A ga-achọta akwụkwọ ọhụrụ Ebe a.
Technology Entertainment na Kere (Ted)
Ebumnuche TED gbadoro na "echiche kwesịrị ịkekọrịta". Ọ bụ usoro mmụta na ntụrụndụ dị maka okwu ndụ yana ịntanetị. Mary gara TED Global na Edinburgh na 2011. N'oge na-adịghị anya mgbe nke ahụ gasịrị, a gwara ya ka ọ hazie nke mbụ TEDx Ihe omume Glasgow na 2012. Otu n’ime ndị ọkà okwu na-abịa bụ Gary Wilson bụ onye kesara ihe ndị kachasị ọhụrụ site na ndị a ma ama website yourbrainonporn.com banyere mmetụta nke ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ n'ịntanetị na ụbụrụ na okwu a na-akpọ "Nnwale Ahụhụ Ukwu Ahụ". Kemgbe ahụ ka elelere okwu ahụ ihe karịrị ugboro nde 13.6 ma sụgharịa ya gaa n'asụsụ 18.
Gary Wilson gbasaa okwu ya na-ewu ewu dị ka akwụkwọ magburu onwe ya, ugbu a na mbipụta ya nke abụọ, a na-akpọ ya Brain gị na Porn: Internet Pornography na Science Emerging of Addiction. N'ihi ọrụ ya, ọtụtụ puku mmadụ ekwuola na ebe nrụọrụ weebụ ịghaghachite na ozi Gary na-akpali ha ịnwale na ịkwụsị porn. Ha kọọrọ na ahụike mmekọahụ na nsogbu nke mmetụta uche malitere ibelata ma ọ bụ kwụsị kemgbe ịkwụsị porn. Iji nyere aka gbasaa okwu gbasara mmepe ahụike na-akpali akpali ma baa uru, Mary jikọrọ Reward Foundation na Dr Darryl Mead na 23 nke June 2014.
Pornse foto bụ nhọrọ onwe onye maka ndị okenye. Anyị apụghị igbochi ya mana anyị kwenyere na ọ bụ nnukwu ihe egwu ọbụlagodi ndị karịrị afọ 18. Anyi choro inyere ndi mmadu aka ime ‘ihe omuma’ nke oma banyere ya site na ihe akaebe si nchoputa ndia di. Anyị kwenyere na ọ ka mma maka ahụike na ahụike iji tinye oge n'ịzụlite mmekọrịta mmekọrịta ọha na eze dị mkpa iji mee ka mmekọrịta mmekọrịta na-arụ ọrụ ogologo oge.
Onyinye wardgwọ Foundationgwọ ahụ na-agba mbọ iji belata ụmụaka ịnweta ngwa ngwa ịntanetị n'ihi ọtụtụ research akwụkwọ akụkọ na-egosi na ọ na-emebi ụmụaka n'oge ha adịghị ike nkwalite ụbụrụ. Onmụaka nọ na ụdịdị dị iche iche na mkpa mmụta pụrụ iche na-enweghị ike imerụ ahụ. Enweela ịrị elu dị egwu nwatakịrị na-emetọ ụmụaka n'ime afọ 7 gara aga, na-enwe mmerụ ahụ metụtara mmekọahụ na-egbu egbu site n'aka ndị ọkachamara ahụike bụ ndị gara ụlọ akwụkwọ anyị nakwa ikekwe ọbụna ọnwụ. Anyị na-akwado nkwado gọọmentị UK gburugburu nkwenye afọ n'ihi na ọrụ dị ka ọ bụ ihe mbụ na ihe nchebe ụmụaka. Dịka e debere Iwu Digital Economy Act Part III, anyị nwere olile anya na gọọmentị ga-eme ngwangwa ọrụ na Bill Harms Online. Nke a abụghị mgbọ ọlaọcha, mana ọ bụ ezigbo ebe mmalite. Ọ gaghị edochi mkpa agụmakwụkwọ maka ihe egwu.
Nkwado na Njikọ
Onye isi oche anyị anatala ọtụtụ onyinye kemgbe 2014 iji zụlite ọrụ nke Foundation. Ọ malitere site na otu afọ ọzụzụ site na ntinye aka nke Social Incovation Incubator nke Scottish na-akwado. Emere nke a na The agbaze ite na Edinburgh. Onyinye mbido abụọ sitere na UnLtd, abụọ sitere na Mmụta Ntụle na nke ọzọ site na Nnukwu Mpempe Lọt. Mary ejirila ego site na ihe onyinye ndị a wee sụgharịa detoxes dijitalụ n'ụlọ akwụkwọ. Ọ mepụtakwala ihe nkuzi banyere ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ maka ndị nkuzi ọ ga-eji na ụlọ akwụkwọ. Na 2017 o nyeere aka iwulite ihe omumu otu ubochi nke Royal College of General Practitioners kwetara. Ọ na-azụ ndị ọkachamara banyere mmetụta ihe nkiri ịntanetị na-ahụ maka ahụike na ahụike.
Mary nọ na Board of Directors of the Society for the Advancement of Health Sexual in the USA site na 2016-19 ma mepụta ụlọ ọrụ ọzụzụ a kwadoro maka ndị na-agwọ nwoke na nwanyị na ndị na-akụzi gbasara mmekọahụ gbasara iji nsogbu ịntanetị na-eto eto nke ndị nọ n'afọ iri na ụma. O tinyere aka na mpempe akwụkwọ maka National Organisation for the Treatment of Abusers na "Mgbochi Omume Mmekọahụ Ọjọọ" ma nyefee ndị nkuzi 3 ọzụzụ banyere mmetụta nke ihe ndị na-akpali agụụ mmekọahụ ịntanetị na-enwe banyere omume mmekọahụ na-emerụ ahụ.
Site na 2017-19 Mary bụ onye mmekọ na Center for Youth and Criminal Justice na Mahadum Strathclyde. Onyinye mbu ya kwuru na mmemme CYCJ na 7 Mach 2018 na Glasgow. Mkpịsị uhie na mkpụrụ mkpọrọ: Nchịkọta mkpa nke ndị na-adịghị ike na-egbochi ụmụ mmadụ.
Na 2018 a họpụtara ya dịka otu n'ime WISE100 ndị inyom na-elekọta ụmụ mmadụ.
Mgbe anaghị arụ ọrụ, Mary na-enwe ọ joụ n'ịgba mwe mwe mwe ọsọ, yoga, ịgba egwu na iso ndị enyi kerịta echiche ọhụụ.
Kpọtụrụ Meri site na email na mary@rewardfoundation.org.